China 5XZ-L Laboratory Gravity Separator mpanamboatra sy mpamatsy | SYNMEC
Ny separator gravity 5XZ-L dia ampiasaina amin'ny fanasarahana ny voa amin'ny fahasamihafana manokana. Esory ny granule misy gravité manokana mavesatra (toy ny gravel, poti-tany), ary ny granule manana hery mivaingana manokana (toy ny masomboly, voa simba noho ny kankana).
Anarana Fanasarahana ny gravity voa laboratoara
fahafahana 50 kg/h
Herin'ny mpitsoka rivotra 0,37 kw
Hery mihetsiketsika 0,13 kw
Frequency vibration 0-600 times/min
lafiny 1000 × 700 × 1440 mm
Ny fandriana sieve dia rafitra telozoro. Misy lavaka fanosehana aluminium bebe kokoa amin'ny faritra famahanana fitaovana. Izany dia natao hanafaingana ny stratification ara-materialy .Ny fivoahana fitaovana amin'ny lafiny iray. Ny fivoahana dia natao ho an'ny fahalotoana maivana, fampifangaroana akora, voa tsara. Misy takelaka azo amboarina mba hahazoana vokatra famahanana tiana.
Ny fanasokajiana ny laboratoara gravity separator amin'ny fahasamihafan'ny hakitroky ny voa. Ny latabatra fanasarahana gravité dia rafitra telozoro. Ny zoro mitsangana, ny zoro mitsivalana, ny fatran'ny vibration, ny haavon'ny rivotra ambany dia azo amboarina avokoa. Izany dia afaka mahafeno ny refy samihafa, ny hakitroky ny fepetra takian'ny fanasokajiana voa. Avy eo ianao dia hizara ny hakitroky ny voa amin'ity andiany voa ity.
Laboratory gravity separator fanorenana:
1. Hopper famahanana
3. Gravity separator latabatra
4. Rafitra fihodinan'ny fiara
6. Fanina ambany
7. Fiara milina
teo aloha: 5XFJ milina fanasokajiana voa / mpanadina voa ho an'ny tsaramaso voamaina
Manaraka: 5XZC-L laboratoara mpanadio voa sy mpanakidy
5XWY indented varingarina halavany grader vary sepa ...
5XZC-L laboratoara mpanadio voa sy mpanakidy
5XFX-L laboratoara mpanadio rivotra voa